Yakavanzika Policy. Terms & Conditions | KUSVIRA
Yakapedzisira kugadziridzwa: 10 Gunyana 2018
At www.mukirana, takazvipira kuchengetedza kuvanzika kwako sevatengi uye mushanyi wepamhepo kune webhusaiti yedu. Isu tinoshandisa ruzivo rwatinounganidza nezvewe kuti tikwanise kuwedzera masevhisi atinokupa iwe. Isu tinoremekedza kuvanzika uye kuvanzika kweruzivo rwunopihwa newe uye tinotevedzera kune Zvakavanzika zveAustralia Nheyo. Ndokumbirawo kuti muverenge mutemo wedu wepazasi nokungwarira.
ZVEKUITA TINOGONESA KUTI UVE
Munguva yekushanya kwako kune webhusaiti yedu kana kushandisa zvigadzirwa uye masevhisi, tinogona kuwana ruzivo runotevera nezvewe: zita, zita rekambani, email kero, nhamba dzefoni, kadhi rechikwereti, kero yekubhadhara, nzvimbo yenzvimbo, IP kero, ongororo mhinduro, mhinduro dzekutsigira, blog mhinduro uye zvemagariro mhete inobata (pamwe 'Yega Dhata').
Masevhisi edu haana kuendeswa kuvanhu vari pasi pe18 uye isu hatizive isu tinotora data yega kubva kune chero munhu ari pasi pe18. Kana tikaziva kuti mwana ari pasi pe18 akatipa neData reDunhu, tinodzima ruzivo rwacho nekukasira. Kana iwe uri mubereki kana muchengeti wemwana uye uchitenda kuti vakatipa neDzivo Dzemunhu pasina mvumo yako, saka ndapota taura nesu.
Unogona kuongorora, kururamisa, kugadzirisa kana kudzima yako dha data nekunyora muakaunti yako uye kuita shanduko pachako kana kuti taura nesu zvakananga kuti uite saizvozvo.
SEI TINOSHANDISA IZVO ZVAKAWANDA
Ruzivo Runozivikanwa Rwakaratidza ruzivo: Isu tinoshandisa ruzivo rwatinotora kuendesa masevhisi edu kwauri, kusanganisira: kutaurirana newe, kupa hutsigiro hwehunyanzvi, kukuzivisa iwe nezvezvinoongororwa uye zvinopihwa, kugovera zviripo zvinobatsira, kuyera kugutsikana kwevatengi, kuongorora matambudziko nekukupa iwe wakasarudzika munhu ruzivo rwewebsite.
Kushambadzira kushambadzira kunongotumirwa kwauri kana iwe wakakumbira kana kunyoresa kwavari. Unogona kusarudza kushambadzira kwedu chero nguva nekusazvinyora kana kutumira email uye chikumbiro chako chinozoitwa nekukasira.
Asiri-Munhu Anozivikanwa Ruzivo: Isu tinoshandisawo ruzivo rwatinounganidza mune dzakaunganidzwa uye dzisingazivikanwe mafomu kuvandudza masevhisi edu, zvinosanganisira: kutungamira webhusaiti yedu, kugadzira mishumo uye analytics, kushambadzira zvigadzirwa zvedu nemasevhisi, kuziva zvinodiwa nevashandisi uye kubatsira mukusangana nezvinodiwa nevatengi kazhinji. .
Chero ruzivo rwaunosarudza kuita pachena, senge blog maoni uye ufakazi pane webhusaiti yedu, huvepo kuti vamwe vaone. Kana iwe ukazobvisa ruzivo urwu, makopi anogona kuramba akataridzika mumapeji akachengetwa uye akachengetwa pane mamwe mawebhusaiti kana vamwe vakateedzera kana kuchengetedza ruzivo.
KUSVIRA NEMAHARA YENYAYA YAKO
Isu tinoshandisa zvese zvine hungwaru nzira dzekuchengetedza zvakavanzika zveYako Dzipi panguva yatinayo kana kutonga. Ruzivo rwese rwatinowana kubva kwauri rwunochengetedzwa uye rwakachengetedzwa pamaseva edu akachengeteka kubva mukushandiswa kusingawanikwe kana kuwana. Ruzivo rwekadhi rechikwereti rwakavanzika pasati paratidzwa uye haruchengetwe nesu pamaseva edu.
Kutigonesa kuendesa masevhisi edu, tinogona kuchinjisa ruzivo rwatinounganidza nezvewe, kusanganisira rweMunhu Dhata, pamiganhu yekuchengetedza uye kugadzirisa mune dzimwe nyika kunze kweAustralia. Kana yako Chako Data ichiendeswa uye yakagadziriswa kunze kweAustralia, inongoendeswa kune nyika dzine zvakakwana kuchengetedzwa kwekuvanzika.
Isu tino chengetedza ruzivo rwako pachedu kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kuti tipe rubatsiro kwauri uye nezvimwewo zvakakosha kuti titevedze zvisungo zvedu zviri pamutemo, kugadzirisa gakava uye kusimbisa zvibvumirano zvedu.
Muchiitiko ichi pane kutyorwa kwekuchengetedza kwedu uye yako Chako Dhaiti ikakanganisika, isu tichakurumidza kukuzivisa iwe mukuteerera mutemo unoshanda.
COOKies Uye mapikisi
Kuki ndiyo faira diki yakaiswa muwebhu browser yako inounganidza ruzivo nezve yako web browser kubheka. Kushandiswa kwemakuki kunoita kuti webhusaiti ienderane nekugadzika kwayo kune zvaunoda uye zvaunoda. Ma cookie haawane ruzivo rwakachengetwa pakombuta yako kana chero Data rePamunhu (semuenzaniso zita, kero, email kero kana nhamba yefoni). Mazhinji mabhurawuza anogamuchira otomatiki asi iwe unogona kusarudza kuramba makuki nekushandura mabhurawuza ako. Izvi zvinogona, zvisinei, zvichidzivirira iwe kubva mukushandisa zvizere webhusaiti yedu.
Yedu webhusaiti inoshandisa makuki kuongorora webhusaiti webhusaiti, kupa vezvenhau kugovana uye kuda basa uye kutibatsira kupa zviri nani webhusaiti mushanyi ruzivo. Uye zvakare, makuki uye ma pixel anogona kushandiswa kushambadzira akakodzera kushambadzira kune vashanyi vewebhusaiti kuburikidza nevechitatu mapato masevhisi akadai seGoogle Adwords uye Facebook Adverts. Aya ma ads anokwanisa kuoneka pane ino webhusaiti kana mamwe mawebhusaiti aunoshanyira.
Kugovera Ruzivo Rwako NEZVITSAUKO ZVITATU
Isu hatidi uye hatisi kuzotengesa kana kubata muPamoyo Nhamba kana chero ruzivo rwevatengi.
Yako yako Ruzivo ruzivo runongobvumidzwa kune wechitatu vatengesi vatengesi kana zvichidikanwa nemutemo, nezvezvinhu kana masevhisi awakatenga, ekubhadhara mari yekubhadhara kana kuchengetedza kodzero yedu, marevhizheni uye mimwe kodzero yepamutemo. Kusvika padanho rekugovana chako Chako dhata nesevhisi, isu tingaite chete kana iro bato rave kubvuma kutevedzera zvakavanzika zvetsika sekutsanangurwa kuri mubumbiro iri rekuchengetedza uye zvichienderana nemutemo unoshanda. Zvibvumirano zvedu nevanhu vechitatu zvinovarambidza kushandisa chero yako data diki kune chero chinangwa kunze kweicho icho chakagovaniswa.
CHIKAMU CHENYAYA YAKO
Isu nguva nenguva tinogona kuda kuburitsa rumwe ruzivo, rwunogona kusanganisira yako Chako Dhata, kutevedzera zvinodiwa pamutemo, senge mutemo, mutemo, court court, subpoena, waranti, mukufamba kwemutemo kana kupindura. kune chikumbiro chemitemo chinokumbira chikumbiro. Zvakare, tinogona kushandisa yako Chako Dhivha kuchengetedza kodzero, pfuma kana kuchengetedzeka kwe www.mukirana, vatengi vedu kana vechitatu mapato.
Kana paine shanduko yekutonga mune rimwe remabhizinesi edu (kungave nekubatanidzwa, kutengesa, kutamisa zvinhu kana neimwe nzira) ruzivo rwevatengi, rwunogona kusanganisira yako Chako Dhata, runogona kuchinjirwa kumutengi pasi pechibvumirano chekuvanzika. Isu taizongofumura yako Data rechokwadi mukutenda kwakanaka uye kupi kunodikanwa nechero mamiriro ezvinhu ari pamusoro.
LINKI KUVANHU VEWEBSITI
Iyi webhusaiti inogona kuve nehukama kune mamwe mawebhusaiti. Izvi zvinongedzo zvinorehwa kuitira kwako nyore chete. Zvinongedzo kune wechitatu mapato webhusaiti hazviiti kutsigirwa kana kubvumirana kana kubvumirwa kweaya mawebhusayithi. Ndokumbira uzive kuti hatisi mhaka yeyakavanzika maitiro emamwe mawebhusayithi. Tinokurudzira vashandisi vedu kuti vazive, kana vasiya webhusaiti yedu, kuti vaverenge zvakavanzika zvega zvega webhusaiti inounganidza ruzivo runogona kuzivikanwa. Iyi mutemo yekuvanzika inoshanda chete kune ruzivo rwakatorwa newebhusaiti ino.
KUCHINJWA KWENYAYA DZESVONDO
Sezvo isu tinoronga kuve nechokwadi chedu yekuvanzika inoramba iripo zvazvino, iyi nongedzo inofanirwa kuchinja. Isu tinogona kushandura mutemo uyu chero nguva, mukufunga kwedu uye zvese zvinoshandurwa zvichashanda nekukanganisika pane yedu kutumira yekugadziridzwa pane ino webhusaiti. Ndokumbirawo mudzoke nguva nenguva kuti muongorore mutemo wedu wekuvanzika.
Kana iwe uine chero mibvunzo kana kunetseka chero nguva nezve yedu yekuvanzika mutemo kana kushandiswa kweYako Dhata, tapota taura nesu pa https://www.stopsafeschools.com/contact uye isu tichapindura mukati maawa e48.
RUDZIDZA VERENGA IZVI ZVESVI UYE ZVINHU ZVINOSHANDISA ZVOKUSHANDISA PASI PASI PASINA KUSHANDISA IYO WEBSITE.
Tikugashirei webhusaiti yedu. Kana iwe ukaramba uchiongorora uye kushandisa iyi webhusaiti iwe uri kubvumirana kutevedzera uye kusungwa neanotevera mazwi uye mamiriro ekushandiswa, ayo pamwe neye yedu yekuvanzika mutemo uye webhusaiti webhusaiti, kutonga www.mukiranahukama hwako newe maererano nezve yako kushandisa iyi webhusaiti.
Nekushandisa iyi webhusaiti, unoratidza kugamuchira kwako aya mazwi nemamiriro ekushandiswa. Nechinangwa chemazwi aya uye mamiriro, "Isu", "Wedu" uye "Isu" anoreva www.mukirana uye "Iwe" uye "Wako" zvinoreva iwe, mutengi, mushanyi, webhusaiti webhusaiti kana munhu anoshandisa webhusaiti yedu.
Isu tinochengeta kodzero yekuchinja, kushandura, kuwedzera kana kubvisa zvikamu zveaya mazwi chero nguva. Ndokumbirawo mutarise aya mazwi musati matomboshandisa webhusaiti yedu kuti muve nechokwadi chekuziva shanduko. Tichaedza kuratidza chero zvakakosha kana shanduko shanduko kwauri pazvinogoneka. Kana iwe ukasarudza kushandisa webhusaiti yedu isu tichaona iko kushandiswa souchapupu hwekupedzisira hwechibvumirano chako uye kubvuma kuti aya mazwi anotonga ako uye www.mukirana'kodzero uye zvisungo kune mumwe nemumwe.
Iyo yakakosha pre-mamiriro kwauri uchishandisa webhusaiti yedu kuti unobvuma uye kugamuchira izvozvo www.mukirana haina mhosva pamutemo kurasikirwa kwega kwega kana kukuvara kwaungave uchitambura maererano nekushandisa kwako webhusaiti, kungave kubva pakukanganisa kana kubva pane zvakasiiwa muzvinyorwa zvedu kana ruzivo, chero zvigadzirwa kana masevhisi atinogona kupa kana kubva chero kumwe kushandiswa kwewebsite. Izvi zvinosanganisira kushandisa kwako kana kuvimba nechero chechitatu bato zvemukati, zvinongedzo, makomendi kana kushambadza. Kushandisa kwako, kana kuvimba, neruzivo kana zvigadzirwa zviri pawebhusaiti iyi zviri panjodzi yako pachako, izvo zvatisingazove nemhosva.
Chichava chako chako basa rekuona kuti chero zvigadzirwa, masevhisi kana ruzivo rwuripo kuburikidza newebsite ino zvinosangana nezvako chaizvo, zvaunoda iwe pachako. Unobvuma kuti ruzivo rwakadai nemidziyo zvinogona kuve nezvakaringana kana zvikanganiso uye isu takabvisa pachena mutoro wekukanganisa kwakadai kana zvikanganiso zvakanyanya kuzere zvinotenderwa nemutemo.
KUSANGANYA UYE KUSVEDZIRA BASA
Nezvinangwa zveRudungwe 2 yeAustralia Consumer Law, kunyanya Zvikamu 51 kusvika 53, 64 uye 64A yeChikamu 3-2, Chikamu 1, Chikamu A cheMakwikwi uye Consumer Act 2010 (Cth), www.mukirana'' mutoro wekuputsa kwenguva yakareba kwechibvumirano ichi kune: kupa zvinhu kana masevhisi kwauri zvakare; kutsiviwa kwezvinhu; kana kubhadharwa kwemutengo wekuve uine zvinhu kana masevhisi anopiwa iwe zvakare.
Iwe unofanirwa kuve uri pamusoro pemakore e18 ekushandisa iyi webhusaiti uye kutenga chero zvinhu kana masevhisi.
Zvinhu zvepanyama zvinogona kuendeswa neAustralia Post uye / kana mamwe makambani ane mukurumbira anotakura zvinhu. Kununurwa kunoongororwa nekukurumidza paunenge wagamuchira kubhadharwa kwakazara. Kudhirivhara kunogona kutora pakati pe2 uye 14 mazuva, zvinoenderana nesarudzo yekuzvitakura. Maira akakuvadzwa kana akarasika anofanirwa kugadziriswa neAustralia Post kana kambani yekutumira zvakananga uye isu hatisi mhaka yezvinhu zvakakuvadzwa mukufambisa kana kusatambira. Kutsiva kwezvinhu zvakakanganiswa kana zvakarasika kunoitwa pakufunga kwe www.mukirana.
Zvigadzirwa zvemadhijitari zvinunurwa ipapo. Ndokumbira uzive kuti kune njodzi dzinozvarwa dzakabatana nekutora chero software uye zvigadzirwa zvemadhijitari. Kana iwe uine chero zvinetso zvehunyanzvi kurodha chero zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu kuitira kuti isu tingaedze kukubatsira.
KUSVIRA UYE RUDZIKI
www.mukirana inobata inodzoka uye inodzosera kudzorera maererano nemutemo weAustralia Consumer Dziviriro.
Kana iwe uchishuva kudzosera yako odhi, ndapota tizivise mukati mazuva ekutenga nechikonzero chakakwana chekudzoka. Kana isu tisingakwanise kugadzirisa kunyunyuta kwako kana kuwedzera kukubatsira, isu tichagadzirisa mubhadharo nekugamuchira nenguva zvinhu zvakatengwa. Zvinhu zvisina kuvhurwa zvinodzoserwa zvizere. Kudzorera mari kunoitwa nekukasira uye kubhadhara kunoitwa nenzira imwechete iyoyo yawakabhadhara. Zvese kudzoserwa kunoitwa pakufunga kwe www.mukirana.
www.mukirana nguva nenguva inogona kupa pane webhusaiti yayo, zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti, kushambadzira uye ruzivo kune avo mawebhusaiti iwe nyore. Izvi hazvireve kunoreva kutsigirwa, kusimbisa, kana kubvumidza kana kuronga pakati www.mukirana uye varidzi veaya mawebhusaiti. www.mukirana haitore mutoro kune chero chipi zvacho chemukati chinowanikwa pane mawebhusaiti akabatanidzwa.
www.mukirana's webhusaiti inogona kunge iine ruzivo kana kushambadza kwakapihwa nevanhu vechitatu kune iyo www.mukiranainogamuchira hapana mutoro chero wezveruzivo kana zano rakapihwa kwauri zvakananga nevanhu vechitatu. Isu tiri kugadzira 'kukurudzira' chete uye hatisi kupa chero zano kana isu hatitore chero mutoro kune chero zano rakawanikwa mune izvi.
Kusvika pamutemo, www.mukirana rinobvisa zvachose mvumo yose, inoratidzwa kana kuisirwa, kusanganisira, asi isina kuganhurirwa, www.mukirana inopa hapana waranti yekuti magwaro, zvinhu kana masevhisi ave asina zvikanganiso, kana kuti zvinorehwa zvinogadziriswa, kana kuti webhusaiti yedu kana sevha yayo haina mavhairasi kana chero zvimwe zvinhu zvinokuvadza.
Ipo isu, nguva dzese tinoedza kuve neruzivo rwakajeka, rwakavimbika uye rwekutsanangudza pane webhusaiti yedu, hatitenderi kana kupa humbowo maererano nekushandiswa kana mhedzisiro yekushandiswa kwegwaro chero ripi zvaro, zvigadzirwa, basa, kubatanidza kana ruzivo rwuri mubhusaiti yayo kana maererano nekurongeka kwavo, kukwana, chokwadi, kuvimbika, kana zvimwewo.
Iri ibasa rako rega kwete basa ra www.mukirana kutakura chero uye zvese zvinodhura zvekushandira, kugadzirisa, kana kugadzirisa. Mutemo unoshanda mudunhu rako kana ndima haugone kubvumidza izvi zvinotsaurwa, kunyanya kusasarudzika kwezvimwe zvinonzi waranti. Zvimwe zvezviri pamusoro hazvishande kwauri asi iwe unofanirwa kuve unoziva nezve njodzi chero ipi yaungave uchitora nekushandisa iyi webhusaiti kana chero zvigadzirwa kana masevhisi anogona kupihwa kuburikidza nazvo. Ibasa rako kuzviita.
At www.mukirana, takazvipira kuchengetedza kuvanzika kwako. Isu tinoshandisa ruzivo rwatinounganidza nezvewe kuti tikwanise kuwedzera masevhisi atinokupa iwe. Isu tinoremekedza kuvanzika uye kuvanzika kweruzivo rwunopihwa newe uye tinotevedzera kune Zvakavanzika zveAustralia Nheyo. Ndokumbirawo kuti muverenge Gwaro Redu Rakavanzika rakasarudzika.
Iwe unogona kushandura ruzivo rwako chero nguva nekutipa zano mukunyora kuburikidza neemail. Ruzivo rwese rwatinowana kubva kune vatengi vedu rwakachengetedzwa nemaseva edu akachengeteka. www.mukirana's yakachengeteka server software inovhara ruzivo rwevatengi hwese isati yatumirwa kwatiri. Uyezve, data rese revatengi rakaunganidzwa rakachengetedzwa pakushandiswa kusingatenderwa kana kuwana. Ruzivo rwekadhi rechikwereti harina kuchengetwa nesu kumaseva edu.
Isu hatidi uye hatisi kuzotengesa kana kubata mune yedu toga kana vatengi ruzivo. Isu tinogona zvakadaro kushandisa nenzira yakajeka pasina kana zita rezita rako, ruzivo rwako kugadzira kushambadzira nhamba, kuziva vashandisi zvinodiwa uye kubatsira mukusangana nevatengi zvinodiwa. Uye zvakare, isu tinogona kushandisa ruzivo rwamunopa kuti uvandudze webhusaiti yedu uye masevhisi asi kwete chero imwezve kushandiswa.
www.mukirana inogona kudikanwa, mune mamwe mamiriro, kuburitsa ruzivo mukutenda kwakanaka uye kupi www.mukiranainodikanwa kuti iite saizvozvo mumamiriro anotevera: nemutemo kana nedare chero ripi zvaro; kumanikidza mazwi eechero ere chero zvibvumirano zvevatengi vedu; kana kuchengetedza kodzero, pfuma kana kuchengetedzeka kwevatengi vedu kana vechitatu mapato.
Kana iwe uri mubhizinesi rekugadzira zvinyorwa zvakafanana, zvinhu kana masevhisi nechinangwa chekuvapa mubhadharo kune vashandisi, vangave vari vashandisi vebhizinesi kana vashandisi vepamba, ipapo uri mukwikwidzi we www.mukirana. www.mukirana pachena haabvumiri uye haikubvumidze kuti ushandise kana kuwana webhusaiti yedu, kurodha chero zvinyorwa kana ruzivo kubva pawebsite kana kuwana chero zvinyorwa zvakadaro kana ruzivo kuburikidza neyechitatu bato. Ukatyora izwi iri ipapo www.mukirana ichakubata iwe zvizere mutoro wekupererwa kwese kwatinogona kuraramisa uye nekuenderera mberi tichiita iwe kuzvidavirira kune pundutso dzese dzaunogona kuita kubva mukushandisa kwakadaro kusanorambidzwa uye kusakafanira. www.mukirana inochengetera kodzero yekusabvisa uye kuramba chero munhu wekuwana webhusaiti yedu, masevhisi kana ruzivo musarudzo yedu tega.
COPYRight, TRADEMARK uye RESTRICTIONS YOKUSHANDISA
Iyi webhusaiti ine zvinhu izvo zviri zvedu kana rezinesi isu. Ichi chinyorwa chinosanganisira, asi hachina kugumira kune, dhizaini, dhizaini, kutarisa, kutaridzika, zviratidzo uye zviratidzo. Iwe haubvumirwe kuburitsa zvinyorwa, ruzivo kana zvigadzirwa zviri pawebhusaiti izvi nekuda kwekutengesa kana kushandiswa neumwe munhu wechitatu. Kunyanya iwe haubvumidzwe kutsikisa, kurodha, kuendesa nenzira yemagetsi kana zvimwe kana kugovera chero zvigadzirwa, zvinyorwa kana zvigadzirwa zvingave zviripo zvekutora nguva nenguva pane ino webhusaiti.
www.mukirana pachena anochengetedza kodzero dzese dzekutengesa uye dzezviratidzo mune zvese zvinyorwa, ruzivo uye zvinhu zviri webhusaiti yedu uye isu tine kodzero yekutora danho newe kana ukatyora chero chipi cheaya mazwi.
Chero kugoverwa zvakare kana kubereka chimwe chikamu kana zvese zviri mukati mechimwe chimiro zvakarambidzwa kunze kwekutevera: unogona kupurinta kana kurodha kune yakasarudzika hard disk yakadhindwa kune yako pachako uye isiri-yekutengesa yekushandisa chete; uye iwe unogona kutevedzera zvirimo kune wechitatu mapato kuti azvishandise pachako, asi chete kana iwe uchibvuma webhusaiti sosi yezvinyorwa zvacho.
Iwe haungatori, asi nemvumo yedu yakanyorwa yakanyorwa, kuparadzira kana kushambadzira kushandisa zvayo. Kana kuti usingazvitumira kana kuzvichengetedza mune imwe nzvimbo yepaiti kana mamwe maitiro ekudzorera magetsi.
Aya mazwi uye mamiriro anomiririra chibvumirano chose pakati pako newe www.mukirana maererano nekushandiswa kwako uye kuwana www.mukirana's webhusaiti yako uye kushandisa kwako uye kuwana magwaro uye ruzivo pazviri. Hakuna rimwe zita rinofanira kuverengerwa muchibvumirano ichi kunze kwekunge parinofanirwa kuverengerwa nemutemo chero upi zvake weCommonwealth kana Chero State. Mashoko ese akataurwa kunze kwekureva ayo anotaurwa nemutemo uye asingakwanise kusarudzika zviri kunze kwenyika ari kunze.
KUSHANDISA KWEMAHARA ASI KUTI Uite
Iko chero clause kana term iri pamusoro ingadai isiri pamutemo inoshanda isiri pamutemo, isina, kana isingagoneki muHurumende chero ipi zvayo kana iyo Tunhu saka chirevo hachishande muNyika iyoyo kana nzvimbo yacho uye ichanzi haina kumbobvira yaiswa mumitsara iyi nemamiriro ezvinhu mu iyo Nyika kana kuti Ndima. Chibvumirano chakadai kana chiri pamutemo uye chinosungirwa mune imwe nyika kana nzvimbo inoramba ichisimbisa zvizere uye chikamu chechibvumirano icho mune mamwe maNyika uye maTunhu. Iko kunofungidzirwa kusabatanidzwa kweimwe nguva yakanangana neiyi ndima hakuzokanganisa kana kugadzirisa kushandurwa kwakazara uye kuvaka kwezvimwe zvirevo zvematemu aya nemamiriro ezvinhu.
Chibvumirano ichi uye webhusaiti ino zviri pasi pemitemo ye VICTORIA uye Australia. Kana paine kupokana pakati pako newe www.mukirana izvo zvinoguma nekunyepedzera ipapo iwe unofanirwa kuzviisa pasi pehutongi hwematare e VICTORIA.